होमपेज / अर्थ / विचार / नयाँ हैन, पृथक शक्ति
नयाँ हैन, पृथक शक्ति	27 Dec 2015 आइतबार १२ पुष, २०७२
पुकार बम/मिलन पाण्डे	Be the first to comment! 12345 (0 votes)
सानो बेलामा गुरुले कक्षामा पढाएको सम्झना हुन्छ– शक्तिलाई एक रूपबाट अर्को रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, तर यसलाई न त पैदा गर्न सकिन्छ न त नष्ट नै गर्न सकिन्छ। यो सिद्धान्त हाम्रो जीवनमा पनि लागु हुन्छ। यही सिद्धान्तले सृष्टि चलेको छ, ठूल्ठूला वैज्ञानिक आविस्कार भएका छन्। र, राजनीति पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। एउटै प्रयोग एउटै तरिकाले हजारपटक दोहोर्या एर फरक नतिजा निकाल्न सकिँदैन। फरक नतिजा खोज्नु मूर्खतामात्रै हुन्छ। सधैँ त्यही पार्टी, त्यही नेतृत्व, एउटै र उस्तै मुद्दा अनि नतिजा कसरी फरक निस्कन सक्छ त? हामीले सधैँ समाधान एउटै घेराभित्र मात्रै खोज्यौँ। हामीले कहिले बीपीको समाजवाद त कहिले मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद, कहिले मओवाद त कहिले मार्क्सवाद, कहिले पुँजीवाद त कहिले साम्यवाद भन्दै वादमा नै सधैँ समाधान खोजिरह्यौँ। तर, नेपालभित्र रहेका साढे ७ लाख समस्याको समाधान कुनै वादमा नभएर नेपालीपनमै लुकेको आत्मसात गरेनौँ। त्यसैले समस्या जहाँको त्यहीँ, नागरिक जहाँको त्यहीँ रहे। उनीहरू सिद्धान्तले फरक देखिए पनि व्यवहार भने एकै छ। फरक आवाज बोले पनि काम गराइ एकै छ, त्यसैको उपज हो आजको यो विषम स्थिति। ठूला भनिएका नेतृत्वलाई सधैँ के लागिरह्यो भने, नागरिक उनीहरूका सेवक हुन्, साधन हुन्। मानौँ वर्षौंदेखि नागरिकले उनीहरूको ऋण खाएका छन्। नेतृत्वले कहिल्यै सत्ता अनि पार्टीभन्दा माथि उठेर जनताको चाहना र पीडा बु‰ने प्रयत्न गरेनन्। गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, महँगी अनि चौतर्फी भ्रष्टाचार उनीहरूको मुद्दा कहिल्यै बन्न सकेन। अब यी जनताको मौनचाहना बु‰न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ र त्यो नेतृत्व पुरानै सोच, पुरानै वाद र सिद्धान्तबाट आउन कदापि सक्दैन। हामीले अब समाधान नेपालभित्रै खोज्नु छ र त्यसका लागि पृथक सोच राख्ने शक्तिकै आवश्यकता छ। त्यसैले हाम्रो मान्यता भनेको नेपालमा नयाँ शक्ति हैन, पृथक शक्ति चाहिएको हो।पृथक शक्तिको आधारविभिन्न कालखण्डमा नेतृत्व गरेका पार्टीहरू पटकपटक असफल भएका कारण पनि पृथक शक्ति जन्मिनु र मूलधारमा आउनु जरुरी छ। पृथक शक्तिको आवश्यकताबारे चर्चा गरिरहँदा यसका आधारहरू केके हुने भन्ने अध्ययन गर्न जरुरी छ। हामीले यही पृथक शक्तिका केही न्यूनतम आधार देखेका छौँ।१) सिद्धान्त अनि व्यवहारमा एकरूपता। अहिलेका पार्टीहरूमा पार्टी सिद्धान्त अनि व्यवहारमा एकरूपता छैन। त्यसैले, पृथक शक्तिको सिद्धान्त अनि व्यवहारमा एकरूपता हुनुपर्छ। बोल्नेमात्रै तर केही नगर्ने बानीको अन्त्य हुनैपर्छ। अबको केही वर्ष हाम्रो लगानी केवल ठूलो दृष्टि, काम र त्यसको उचित परिणामका निम्ति हुन आवश्यक छ।२) जवाफदेही अनि पारदर्शिता। मूलधारका राजनीतिक पार्टीमा जवाफदेही नेतृत्व र पारदर्शिताको कुनै अभ्यास नै छैन। जसले जे गरे पनि हुने, सधैँ आफ्नो सोझो गर्ने र आफ्नो हित तथा स्वार्थमात्र हेर्ने, देशको सवालमा पार्टीगत हित हेर्ने, पार्टीगत सवालमा गुटगत स्वार्थ हेर्ने र गुटमा कुरो नमिल्दा मनखुस गर्ने, तर परिआएको खण्डमा सही होस् या गलत जिम्मेवारी लिने परिपाटी छैन। पृथक शक्ति (पार्टी)को नेतृत्व पारदर्शी र जवाफदेही हुनैपर्छ। सानोभन्दा सानो काम वा लेनदेनमा पनि पारदर्शिता अपनाइनुपर्छ भने चाहे आफूले गरेको होस् या आफ्नो नेतृत्वमा भएको या त आफ्नो अधिनमा आउने सम्पूर्ण क्रियाकलापमा जवाफदेही र जिम्मेवारीबोध हुन आवश्यक छ।३) संरचना अनि नेतृत्व हस्तान्तरणको सुनिश्चितता। पार्टीमा ...चेक एन्ड ब्यालेन्स' हुनु अत्यन्त जरुरी छ। अबको शक्तिले नेतृत्वलाई सधैँ सत्तामुखी रहने नियत र व्यवहारबाट टाढा राख्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक दलभित्र समयसमयमा सबैको काम–कर्तव्यको लेखाजोखा, जिम्मेवारी बहन, पारदर्शितापूर्ण आचरण अपनाइनुपर्छ। त्यस्तै, निश्चित समयावधिमा नेतृत्व हस्तान्तरण अनि पार्टीको संरचनामा माथिको नेतृत्वबाट तलमात्रै नभई तलको नेतृत्वबाट माथिसम्म निर्णायक पहुँच रहनैपर्छ। पार्टीको संरचना यस्तो बनाइनुपर्छ जसले पार्टीमा चेक एन्ड ब्यालेन्स कायम गर्न सकोस्।४) मध्यमार्गी अनि सुधारमार्गी। समय परिवर्तनशील छ। तर, हाम्रा अहिलेका पार्टी सयौँ वर्ष पुरानो आचरण, सिद्धान्त र व्यवहार बोकेर हिँडिरहेका छन्। पुरानै मान्यतालाई पनि पूर्णरूपमा आत्मसात गर्न सकेका छैनन् न त राम्ररी कार्यान्वयन नै। अझ भनौँ राम्ररी बु‰नसम्म सकेका छैनन्। केवल सुगा रटाइको भरमा ...मेरोचाहिँ ठीक, तेरो बेठीक' भन्दै लिँडेढिपीमा झगडा गरेर मुलुकलाई वर्षौं पछि धकेल्दैछन्। पृथक शक्ति मध्यमार्गी अनि आफूलाई समयानुकूल सुधार गर्नसक्ने हैसियत राख्ने हुनुपर्छ। सबैको कुरो सुन्ने, आफ्नो कुरो पनि राख्ने र उचित समयमा देश र जनताको हितमा निर्णय गर्न सक्ने हुनुपर्छ।५) जिम्मेवार सदस्य (कार्यकर्ता)। विद्यमान राजनीतिक पार्टीहरू अक्षम अनि भ्रष्ट हुनाको पछाडि नेतामात्रै दोषि छैनन्, तिनका कार्यकर्ता अनि समर्थक पनि दोषि छन्। जागिरदेखि सानोसानो कुरामा भनसुन गरेर शक्तिको दुरूपयोग गराउने भ्रष्टाचारी समर्थक अनि शक्तिमा पुग्नका लागि त्यसो गर्ने नेतृत्व भएकैले अहिलेका नेतृत्व अनि पार्टी फोहोरी राजनीतिको दलदलमा फसेका हुन्। त्यसैले अब बन्ने पृथक शक्तिका समर्थक अनि नेतृत्व विवेकशील हुन जरुरी छ।इतिहासको रचयिता सधँै युवा शक्ति नै रहेको पाइएको छ। अहिले आधा नेपाली २१.६ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् भने १५ वर्षदेखि ४० वर्षसम्मका युवा ४०.३४५ प्रतिशत छन्। तर, हालको राजनीतिमा युवाको त्यो हिसाबको प्रतिनिधित्व छैन। हालको युवा उपस्थितिले अनि त्यही स्थितिमा उनीहरूको भूमिकाले पृथक शक्ति बन्न सक्दैन। त्यसैले अब सक्षम युवा जमात राजनीतिमा आउन जरुरी छ। पृथक शक्तिमा सक्षम युवाकै नेतृत्व हुनुपर्छ।हालको अवस्थामा हाम्रो देशमा नेतृत्व यति धेरै अक्षम बनेको छ कि, देशलाई क्यान्सर लागेको अवस्था छ, तर हामी उपचारका नाममा बु्रफिन दिएर निको बनाउन खोज्दैछौँ। क्यान्सर निको या नियन्त्रण गर्न केमियोथेरापी नै दिनुपर्छ। त्यो कठिन र सहन गाह्रो अवश्य छ, तर असम्भव छैन। अब राजनीतिको क्यान्सर लागेको भाग फाल्नुको विकल्प छैन। समाधान त्यही पुरानोबाट आउन सक्दैन। अब समाधान हालको राजनीतिभन्दा अलि बाहिरको, अहिलेसम्म यो राजनीतिमा नभिझेको नेतृत्वबाट आउन सक्छ।हामीले खोजिरहेको पृथक नेतृत्व लामोलामो भाषण गर्ने, ठूल्ठूला सपना बाँड्ने, सत्तालिप्त राजनीति गर्ने हैन, पृथक नेतृत्व कहिले कुचो समातेर युवालाई प्रेरित गर्न गल्लीगल्ली छिर्नुपर्छ त कहिले दोबाटोको चिया पसलमा बसेर आश गरेका नागरिकलाई नयाँ किरण देखाउन तम्सिनुपर्छ। त्यसैले पृथक शक्तिको जग सामान्यतया पृथक सोच अनि व्यतित्वको रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। नयाँ शक्ति कहिलेसम्म नयाँ रहन सक्छ र? परिवर्तन आजको भोलि हुँदैन, समय लाग्छ अनि नयाँ शक्तिबाट जुनजुन आशा नेपाली जनताले गरेका छन् त्यसलाई थेग्न सक्ने नेतृत्व चाहिएकोले त्यो आशा पूरा गर्न नसक्दा नयाँ शक्ति फेरि पुरानै हुन्छ। त्यस्तो पुरानो शक्ति असफल हुने डर छ। त्यसैले हामीलाई नयाँ हैन, दिगो र पृथक शक्ति चाहिएको छ जुन सक्षम युवा नेतृत्वको जगमा उभिने छ।बम विवेकशील नेपालीका कार्यपालिका प्रमुख र पाण्डे केन्द्रीय व्यवस्थापिका सदस्य Tweet प्रतिक्रिया